dynamics - Synonyms of dynamics | Antonyms of dynamics | Definition of dynamics | Example of dynamics | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for dynamics
Top 30 analogous words or synonyms for dynamics
ဂီတ tempo,meter နှင့် articulation တို့ပါဝင်သည်) dynamics နှင့် timbre နှင့် texture တို့၏ အသံအရည်အသွေးစသည့် အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ ဂီတဆိုသော အင်္ဂလိပ်စကားလုံး music သည်ဂရိဘာသာစကား μουσική (mousike)မှဆင်းသက်လာသည်။
ကားတစ် တီ မက်မောလန် ကားတစ် ထရေစီ မက်မောလန် () ( ဖွား) သည် ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်မှ သင်္ချာပညာရှင် ပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ကွန်ပလက်စ်ကိန်းခေါ် ကိန်းရှုပ်များ အသုံးပြုသည့် ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားစနစ်များ (complex dynamics)၊ ဟိုက်ပါဘောလစ် ဂျီဩမေတြီ () နှင့် တိုက်ရှ်မူလာ သီအိုရီ ()၊ စသည်တို့နှင့် သက်ဆိုင်သော သုတေသနလုပ်ငန်းများ အတွက် ကျော်ကြားသူဖြစ်သည်။
လီယွန်ဟတ် အွိုင်လာ လီယွန်ဟတ် အွိုင်လာ (၊၊ ;)သည် ဆွစ်လူမျိုးဖြစ်ပြီး သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒ၊ နက္ခတ္တဗေဒ၊ ယုတ္တိဗေဒ၊ အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်တို့ကို တတ်ကျွမ်းသော ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သူ၏ ဂရပ်သီအိုရီနှင့် ကဲကုလသင်္ချာဘာသာရပ်တို့တွင် ထုတ်ဖော်ခဲ့သော သီအိုရီတို့သည် ယနေ့ခေတ်တိုင်အောင် လွှမ်းမိုးမှုရှိနေသော ကြီးကျယ်သော သီအိုရီများဖြစ်ကြသည်။ ထိုမျှမကသေး သူသည် ကိန်းသီအိုရီနှင့် တိုပိုလိုဂျီ အစရှိသော ဘာသာရပ်တို့တွင်လည်း များစွာသော ဥပဒေသတို့ကို တွက်ထုတ်ခဲ့သေးသည်။ ယနေ့ခေတ် သင်္ချာပညာရပ်၏ ဝေါဟာရဗေဒနှင့် သင်္ကေတများစွာတို့ကိုလည်း သတ်မှတ်ပေးခဲ့သေးသည်။ သူ၏ ရှေးရိုးစွဲရူပဗေဒ၊ အလင်းသီအိုရီ၊ ဖလူးဝစ် ဒိုင်းနမစ် (Fluid Dynamics)၊ နက္ခတ္တဗေဒနှင့် ဂီတသီဝရီတို့တွင် ကြိုးပမ်အားထုတ်မှု များသည်လည်း ထင်ရှားလှသည်။
Post-rock Post-rock sound သည် ဂီတဆိုင်ရာမျိုးခွဲများစွာများမှ ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားပြီး post-punk, progressive rock, space rock, ambient, club,electonica နှင့် experimental နှင့် Jazz ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်သော cool jazz, avant-garde jazz နှင့် free jazz တို့ပါဝင်သည်။ အစောပိုင်း post-rock အုပ်စုများ ရ၀s krautrock ၏ပြင်းထန်သော လွှမ်းမိုးမှုများကို ခင်းကျင်းပြသခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် Krautrock rhythm မှ ဝိသေသလက္ခဏာ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ Post-rock သည် အနုစိတ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ တီထွင်သူအနည်းဆုံး အရေအတွက်ထဲတွင် Steve Reich, Philip Glass နှင့် Brian Eno တို့ပါဝင်သည်။ post-rock ၏အစိတ်အပိုင်းထဲတွင် ရှည်လျားသော ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ဖြစ်ပြီး timbre, dynamics နှင့် texture တို့ပါဝင်သည်။
အမ်အိုင်ဂျီ-၂၉ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ၊ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် ဆိုဗီယက်လေ့လာသူများ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်သည်ကား မတူထူးခြားသည် တိုက်လေယာဉ်များ လိုအပ်သည် ဆိုသည်သာဖြစ်သည်။ PFI (အဆင့်မြင့် ရှေ့တန်းတိုက်လေယာဉ်) အစီအစဉ်အား LPFI(အဆင့်မြင့် ဗျူဟာမြောက် အပေါ့စားတိုက်လေယာဉ်) စီမံကိန်းက ထောက်ခံပေးပြီးနောက် ဆိုဗီယက် တိုက်ခိုက်ရေးအဖြွ့သည် အဆင့်မြင့် ရှေ့တန်းတိုက်လေယာဉ် ၃၃ % နှင့် (အဆင့်မြင့် ဗျူဟာမြောက် အပေါ့စားတိုက်လေယာဉ် ၆၇ % ပါဝင်သည် အစီအစဉ်ကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ PFIနှင့် LPFIတို့သည် အမေရိကန်လေတပ်၏ အပေါ့စားတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ် တီထွင်ဖန်တီးရေး အစီစဉ်များနှင့် General Dynamics F-16 Fighting Falcon and Northrop YF-17 အစီအစဉ်တို့အား န်ှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ PFI PFI (အဆင့်မြင့် ရှေ့တန်းတိုက်လေယာဉ်) ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဆူခွိုင်း ကုမ္ပဏီအား တာဝန်ယူစေပြီး ရလာဒ်အနေဖြင့် ဆူခွိုင်း Su-27 အားတီတွင်နိုင်ခဲ့သည်။ LPFI (အဆင့်မြင့် ဗျူဟာမြောက် အပေါ့စားတိုက်လေယာဉ်) ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် မီခိုရမ် ကုမ္ပဏီအား တာဝန်ယူစေခဲ့သည်။ ထို့နောက် Mikoyan Product9အား အသေးစိတ် ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲစေပြီး မစ်-29အေ(Mig-29A) ကို ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ပြုလုပ်စေပြီး ပထမဆုံးသော အစမ်းပျံသန်းမှုကို ၁၉၇၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် စတင်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်းတွင် အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေး ဂြိုလ်တိုမှတစ်ဆင့် ထုတ်လုပ်အရေးအကြိုလေယာဉ်အား အစက်ပြထောက်လှမ်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရမ်စကိုရီမြို့ (Ramenskoye) ၏ Zhukovsky လေယာဉ်အစမ်းလေ့ကျင်ရေးဗဟိုဌာနတွင် ရှာဖွေ ထောက်လှမ်းရမိသည့် ထိုအရာအား ရမ်-အယ် အဖြစ်အမည်ပေးခဲ့သည်။
ဗွီ-၁ ဗုံးပျံ There wasamore sophisticated interaction between yaw, roll, and other sensors:agyrocompass (set by swinging inahangar before launch) gave feedback to control the dynamics of pitch and roll, but it was angled away from the horizontal so that controlling these degrees of freedom interacted: the gyroscope remained true on the basis of feedback received fromamagnetic compass, and from the fore and aft pendulum. This interaction meant that rudder control was sufficient for steering and no banking mechanism was needed. InaV-1 which landed in March 1945 without detonating between Tilburg and Goirle, Netherlands, several rolled issues of the German wartime propaganda magazine "Signal" were found inserted into the left wing's tubular steel spar, used for weight to preset the missile's static equilibrium before launching. It is also known that several of the first buzz bombs to be launched were provided withasmall radio transmitter (usingatriode valve marked 'S3' but being equivalent toathen-current power valve, type RL 2,4T1), to check the general direction of flight related to the launching place's and the target's grid coordinates by radio bearing.
မီယာအာကာသစခန်း The first manned mission flown from an independent [[Kazakhstan]] was [[Soyuz TM-14]], launched on 17 March 1992, which carried the [[Mir EO-11|EO-11]] crew to "Mir", docking on 19 March before the departure of Soyuz TM-13. On 17 June, Russian President [[Boris Yeltsin]] and U.S. President [[George H. W. Bush]] announced what would later become the Shuttle-"Mir" programme,acooperative venture which would prove very useful to the cash-strapped Roskosmos (and led to the eventual completion and launch of "Spektr" and "Priroda"). [[Mir EO-12|EO-12]] followed in July, alongsideabrief visit by French astronaut [[Michel Tognini]]. The crew which succeeded them, [[Mir EO-13|EO-13]], began preparations for the Shuttle-"Mir" programme by flying to the station inamodified spacecraft, [[Soyuz TM-16]] (launched on 26 January 1993), which was equipped with an [[APAS-89]] docking system rather than the usual probe-and-drogue, enabling it to dock to "Kristall" and test the port which would later be used by U.S. space shuttles. The spacecraft also enabled controllers to obtain data on the dynamics of dockingaspacecraft toaspace station off the station's longitudinal axis, in addition to data on the structural integrity of this configuration viaatest called "Rezonans" conducted on 28 January. [[Soyuz TM-15]], meanwhile, departed with the EO-12 crew on 1 February.